Mandarin kwa ụbọchị: "Obi ụtọ" n'asụsụ Chinese
Mụta 4 Ụzọ dịgasị iche iche iji kwuo "obi ụtọ" n'asụsụ Chinese
E nwere ọtụtụ ụzọ isi kwuo na obi ụtọ na Chinese. Dị ka n'asụsụ Bekee, okwu ndị Chinese na-ekwu okwu ka mkparịta ụka ahụ ghara ịdịghachi iche. Lee ụzọ atọ i nwere ike isi kwuo "obi ụtọ" na Chinese tinyere ihe atụ nke otu esi eji okwu ahụ. Ejiri faịlụ faịlụ na ►.
Iji kọwaa ọnọdụ nke inwe obi ụtọ n'oge ahụ, ị ​​ga-eji okwu ahụ na-amalite. 高 (g ao) pụtara elu, mgbe 兴 (xìng) nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na-adabere na ọnọdụ ahụ, site na "mmasị" iji "nwee ọganihu."
Maka ihe atụ nke mgbe ị ga-eji 高兴, ị nwere ike ịsị:
吃 了 这 顿 美味 的 兒后, 我 很 高兴 (chī le zhè ụtọ měi wèi de fàn hòu, wǒ hěn gāoxìng): "Mgbe m risịrị nri a dị ụtọ, obi dị m ụtọ"
Mgbe ị na-ekwupụta obi ụtọ n'ịhụ mmadụ, ị ga-eji okwu ahụ bụ Shisha. Ọmụmaatụ:
我 很 高兴 认识 你 (wǒ hěn gāo xìng rèn shi nǐ): "Ọ dị mma izute gị"
开心 (kāi xīn)
开 (kāi) pụtara "oghe," mgbe 心 (xīn) pụtara "obi." A na-eji ụzọ ndị yiri ya eme ihe na 开心 na 高兴, a ga-arụ ụka na a na-eji 开心 dị ka ụzọ isi kọwaa ọnọdụ uche ma ọ bụ àgwà. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịsị 她 很 开心 (tā hěn kāi xīn) nke pụtara "obi dị ya ezigbo ụtọ."
Ma n'ihe banyere izute mmadụ, ị gaghị eji 开心. Dị ka ọmụmaatụ, 我 很 高兴 认识 你 bụ okwu njirike nke pụtara "Ọ dị mma izute gị." Ịgaghị anụ ka onye na-ekwu 我 很 开心 认识 你.
Esika (xiing fú)
Dika 高wara na-akọwa oge di ntakiri ma ọ bụ ọnọdụ obi ụtọ dị mkpirikpi, mmeka (xìng fú) na-akọwa ọnọdụ dị ogologo ma ọ bụ na-adịgide adịgide nke inwe obi ụtọ.
Ọ pụkwara ịpụta "ịgọzi" ma ọ bụ "ngọzi." Uzo nke mbu bu ‗mechioma, 'mgbe okwu nke abuo bu "uba."
Ndị a bụ ihe atụ nke oge iji okwu mmebi:
祝 你们 家庭 幸福 (zhù nǐ men jiā tíng xìng fú): "Na-achọ ngọzi gị."
如果 你 结婚, 妈妈 会 很 幸福 (rú guǒ nǐ jié hūn, mā mā huì hěn xìngfú): "Ọ bụrụ na ị lụọ, mama ga-enwe obi ụtọ."
快乐 (ị nwere ike)
快乐 nwekwara ike ide ede na omenala. Uzo mbu bu 快 (kuài) putara ngwa ngwa, ngwa ngwa ma obu ngwa ngwa. Ụgha nke abụọ 乐 ma ọ bụ 樂 (ike) na-asụgharị obi ụtọ, ịchị ọchị, nwee obi ụtọ, ma nwee ike ịbụ aha nna. A na-akpọ okwu ahịrị ► zaài ike , na ihe odide abụọ ahụ dị ụda nke anọ (kuai4 le4). A na-ejikarị okwu a maka obi ụtọ mee ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ n'oge ememe ma ọ bụ ememe.
Nkea bu ihe omuma atu nke 快乐 eji mee ihe n'amaokwu:
► Pịa ebe a.
她 过 得很 快乐.
Ọ na-enwe obi ụtọ na ndụ ya.
► Ọ bụrụ na ị nwere ike.
Ezi afọ ọhụrụ.
Aha aha German na nsụgharị ha
Nzọụkwụ Nzọụkwụ nke "Mmasị" (na Mmasị)
Ihe nke Majime na Japanese
Ihe Suteki na Japanese
Mgbidi - Ogige, Bend
Mụta Mmasị Dị Mfe Maka "Ogbugbu" (iji ọchị)
Okwu French na Mgbu
Ịzụlite Ọmụmụ Okwu Site na Ịgụ na Bekee
Nyocha - iji mezuo, mezue; iji mara
Ọ bụrụ na 'En' na 'Dans' pụtara 'na,' olee otu i si eji ha?
Mandarin kwa ụbọchị: "ihe" na Chinese
Krismas na France: Akwukwo Igbo-English Side-by-Side
Gọọmentị nwere ike inyere gị aka ịzụta 'Fixer-Upper' Home
Atụmatụ Italian na Tra
Mansions, Manors, na nnukwu ala na United States
Oge kachasị njọ Oscar nke dike
Kedu ihe na-akpata nsị ụyọkọ?
Mụta ihe gbasara adalata nke Ịtali
Glas Block UV Ìhè? Ị nwere ike ịnweta ntachu?
Nnukwu Ihe Egbochi Nnukwu Ihe
Ihe Mgbakwunye ma ọ bụ Mgbatị: Nke dị mma maka gburugburu ebe obibi?
Ọnwa anọ iji wuo Ụlọ Ọhụrụ
Ndị isi nzuzo nke ụwa nke Western Occult omenala
Canvas na Canvass
Top Tabs maka Ịmụ Bad
Ụlọ akwụkwọ College Elms
Ndi ugbua iku ume ka iku ume?
Usoro Nyocha SAT Redesigned
Kedu ihe bụ protein kachasị mma?
Kedu ihe bụ Top 10 Movies Banyere Ndị ọbịa ọbịbịa?
Akwụkwọ Ụmụaka kacha mma ụmụaka
Ebee Ka Ịchọta Nyocha GMAT Gessa Free
Kedu ihe na - eme ma ọ bụrụ na ị na - ejikọta mmanụ mmanụ mgbe niile?
Mahadum Tufts University
Agha Ụwa nke Abụọ: Agha nke North Cape
Achịkọ akụkọ banyere CEDAW
Kedu ihe nkịta ndị ahụ na-agba na golf (Birds, Bogeys, Pars) pụtara?